Naghachi Photos Echefuola Mgbe enyefere igwefoto ka Computer
> Resource> Nyefee> Naghachi Photos Echefuola Mgbe enyefere igwefoto ka Computer
Ọ dịtụla mgbe ị nsogbu site na nke a? Ị na-anya akpachapuru anya ebufe foto gị site igwefoto na kọmputa, ma n'ụzọ ụfọdụ foto "okụrede". Ị na-eche otú ọ pụrụ ime na chọrọ naghachi photos aba ke ini data transfer, mgbe mgbe ụfọdụ na ị ọma na-eme na, mgbe ụfọdụ, ị dị nnọọ na-emezughị.
Na nke a ọ bụ ihe amamihe na-agbalị foto mgbake software ego ma ọ bụrụ na gị furu efu foto nwere ike gbakee. N'ihi na Windows ọrụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare Photo Recovery. Nke a n'ihe ize ndụ-free omume nwere ike naghachi photos furu efu si dijitalụ ese foto ma ọ bụ kọmputa na mbụ mma. N'otu oge ahụ, na-ekpe ikpe version ike ka ị hụchalụ mmetụta ọ na thumbnail ịhụ ma gị foto bụ recoverable ma ọ bụ. Ebe a m aro bụ ka iṅomi igwefoto na kọmputa ma, rụọ ihe ịga nke ọma ọnụego nke na-agbake furu efu foto.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, na-eji Wondershare Photo Recovery for Mac.
Atụmatụ: Adịghị wụnye Wondershare Data Recovery na otu nkebi ebe ị furu efu data maka ezere overwriting mbụ data.
3 nzọụkwụ naghachi photos furu efu ruru ebufe
1. Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa, ẹkedori usoro ihe omume na pịa "Malite" na-amalite.
2. Họrọ ngwaọrụ ike iṅomi. Ọ bụrụ na-agbalị ịchọta azụ furu efu foto site na kọmputa, kpọmkwem na-agba ọsọ omume na họrọ nkebi ebe ị furu efu gị photos ike iṅomi.
3. Mgbe Doppler, ifiọk na-elele recoverable photos scanned si.
4. Họrọ ndị ị chọrọ na ịrụ mgbake.
Video nkuzi nke na-agbake data furu efu n'oge na-ebufe
Ihe mere i nwere ike naghachi furu efu photos
Mgbe foto furu efu, data na-bụghị mgbe niile furu efu, dị nnọọ adịghị anya ma ọ bụ ogugu n'ihi na ntinye index nke usoro-eme ka a pụrụ iche akara na ndị data hinting mpaghara ebe a nwere ike e dere ihe karịrị ndị ọzọ ọhụrụ data. Ya mere, na n'uche: anaghị etinye ọzọ foto ma ọ bụ ndị ọzọ data na otu ebe ebe gị furu efu foto e echekwara, ebe ọ bụ na mgbe ị na-etinye ndị ọzọ ọhụrụ faịlụ na ya, nke a free ohere ga-overwritten site ndị ọzọ, nke na-eme ka o sie ike naghachi furu efu foto.
Ụfọdụ ndapụta ime ka foto ọnwụ
1. Mgbe ejikọta igwefoto na kọmputa, ị na-amalite na-ebufe gị foto. Mmadụ na mberede ị na-emetụ ndị data waya, na-eme USB mgbagwoju. Ọ bụghị ihe niile ndị photos na-ọma-agafere na ụfọdụ na-efu.
2. The mberede ike-anya nke igwefoto ma ọ bụ kọmputa pụrụ iduga foto furu efu kwa. Ozugbo nke ahụ mere, ndị na-ebufe usoro ga-akwụsịtụ forcibly, na ụfọdụ nke foto gị nwere ike na-efu.
3. Ọ bụrụ na kọmputa gị na-adịghị na-ezuru ohere na-echekwa ọzọ foto, data ebufe gaghị okokụre ruo mgbe ụfọdụ ohere a tọhapụrụ. Ọ bụrụ na ị 'Cut'-' Paste 'na foto ahụ ma nọgide na-ebufe ya, foto ga-efu.
4. The virus. Ọ bụrụ na gị foto na-emetụta na virus, mgbe ị nyefee ya site igwefoto ka kọmputa, na-emegide virus software na kọmputa gị nwere ike igbu nje site ihichapụ foto na-akpaghị aka. The virus-ehichapu ma foto gị na-efu.
5. E nwere ihe ọzọ ọnọdụ dị otú a.
Olee otú undelete Photos si A Kaadị ebe nchekwa
Nyefee na Ndi ana-akpo si Nokia ka Nexus 5 Mfe
Nyefee SMS si iOS, Android, na Symbian ekwentị mkpanaaka na iOS 7/8/9